Atụmatụ Mgbasa Ozi Nlekọta Mgbasa Ozi Nlekọta Mgbasa Ozi Site na Ọkachamara Ị Ga-amara
Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ obere ọrụ ọhụrụ, enwere ike ịnweta ilekọrịta mgbasa ozi ọha na eze. Ọ bụrụ na ị na-etinye oge karịa oge na weebụsaịtị dịka Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, na Google, Nik Chaykovskiy, ọkachamara , na-eme ka ị jide n'aka na saịtị ndị a ga-enye gị ọtụtụ nba uru oge. Ya mere, ọ dị mkpa ịhọrọ ebe nrụọrụ weebụ na-elekọta mmadụ n'ụzọ amamihe ma nọrọ oge na njikwa ha. Ogologo oge ole ị na-eji eme ihe ga-ekpebi ole ka ị na-eche na ebe nrụọrụ weebụ gị na-abawanye na ọtụtụ ngwaahịa ị nwere ike ree ere. Facebook na Twitter bụ netwọk mgbasa ozi abụọ kachasị mkpa, ebe njirimara nke onwe na ihe ngosi dị oke mkpa. Taa, anyị na-akọrọ ụfọdụ ahịa ahịa mgbasa ozi maka obere obere ọchụnta ego - graph browser.
Mgbe ị na-eji Facebook, ị kwesịrị ịmepụta ibe, jikọta obodo ma tinyekwuo ndị mmadụ site na mgbasa ozi Facebook. Ndị a agaghị efu gị ọtụtụ, mana ndị na-eleta anya gị ga-amata ihe niile gbasara ika gị na azụmahịa gị. Ihe mbụ ị ga-eme bụ ịmepụta azụmahịa gị ma nweta Facebook. Jide n'aka na ị jupụta n'ọtụtụ ntinye ọdịnaya na ide ederede gbasara ụdị gị. Kee akwukwo n'ime obodo ma gwa ndi ozo ka ha choo ya..Nzọụkwụ ọzọ bụ ịmepụta atụmatụ maka Facebook ma bipụ isiokwu mgbe ọtụtụ n'ime ndị Fans gị nọ n'Ịntanet. Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ị na-ahazi ihe ndị ahụ ma na-ahụkarị ya, karịsịa n'oge kachasị elu.
Mgbe ị na-eji Twitter, ihe mgbaru ọsọ gị kwesịrị ịbụ iji nweta ọtụtụ ndị na-eso ụzọ ma tinye nkedo kwesịrị ekwesị iji mee ka o kwe omume. Twitter bụ otu n'ime ụzọ kacha mma ị ga-esi na-ekwurịta okwu ma na-ekwurịta okwu na ụwa. Ọ bụrụ na tweet gị na-aga ịrịa ọrịa, ị nwere ike ijide n'aka na ị ga-enwe ọhụụ dị mma n'ịntanetị. Ihe mbụ iji mee ka o kwe omume bụ iji ọrụ gị dị mma nke ọma. Tinye aha gị, foto profaịlụ ma dee ntakịrị banyere onwe gị na njikọ na azụ gị. Nzọụkwụ ọzọ bụ ịhọrọ ndị ịchọrọ ịgbaso ma gwa ha ka ha soro gị azụ. Tinyegharịa usoro a kwa ụbọchị ma jide n'aka na ị ga-enwe mmasị na ndị na-ege gị ntị n'oge niile. Ọ bụrụ na ịkekọrịta ụfọdụ ihe na-bara uru na Twitter, enwere ohere ị ga-enweta ọtụtụ ndị na-eso ụzọ n'ihe gbasara ụbọchị.
LinkedIn bụ nke atọ na-ahụ maka mgbasa ozi mgbasa ozi ọha na eze a ma ama. Ndị a na-achọ ọrụ na ndị ọchụnta ego na-ezukọ kwa ụbọchị. Ọ gaghị adị njọ ikwu na LinkedIn bụ CV dijitalụ gị. N'ebe a, ị ga-ede banyere onwe gị na ahụmahụ ọkachamara, akwụkwọ mmụta ma gbalịa ijikọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị mmadụ. Ka ndị mmadụ ị jikọtara na ya, ihe ka elu ga-abụ ohere ị ga-eji nweta ụgwọ ọrụ n'ịntanetị. Ọbụna mgbe ị na-eme ma na-akwalite azụmahịa na LinkedIn, ịnwere ike ịnweta mgbasa ozi na-adabere na ọnụ ọgụgụ njikọ na ụmụazụ gị nwere. Na-akwalite ọdịnaya gị ebe a mgbe nile ma na-ekere òkè na-eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa ụbọchị.